Dalal Afrika ku yaalla oo taageeray go’aankii Trump ee Qudus | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Dalal Afrika ku yaalla oo taageeray go’aankii Trump ee Qudus
Dalal Afrika ku yaalla oo taageeray go’aankii Trump ee Qudus
Togo waa dalka keliya ah ee Afrika ee codkiisa ku taageeray go’aankii Trump uu Qudus ugu aqoonsaday in ay tahay caasimadda Israa’iil.
Golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobey ayaa cod u qaaday qaraar lagu dalbanayay in mareykanka uu ka laabto go’aanka Qudus.
Arbacadii, Madaxweyne Trump wuxuu ku cagajugleeyay in kaalmada dhaqaalaha uu ka jari doono dalkii ka hor yimaadda go’aankiisa.
Sidoo kale, safiirkiisa Qaramada Midoobey u qaabilsan, Nikki Haley, waxay sheegtay in Mareykanka “uu qoran doono magacyada” dalalka ka hor yimaada, “si dhowna u eegayo” sida waddamada ay u codeynayaan
Togo waxay ka mid tahay sagaalka dal ee keliya ee diiday qaraarka Qaramada Midoobey. Dalalka kale waxaa ka mid ah Israel, Guatemala, Honduras, Jasiiradaha Marshall, Micronesia, Nauru, Palau iyo Mareykanka
Golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay ayaa si wayn u taageeray qaraarka Maraykanka ugu baaqaya in uu ka laabto in uu Qudus u aqoonsado caasimadda Israa’iil.
Warka qoraalka ah ayaa lagu sheegay in go’aankasta oo laga qaatay Qudus uu yahay mid aan waxba ka jirin, ayna waajib tahay in laga laabto.
Arrintan ayaa timid ka dib markii madaxweyne Trump uu ku goodiyay in uu kaalmada dhaqaale ka jari doono dalalka taageera qaraarkaas
Waxaa qaraarkan ka soo horjeedsaday Maraykanka, Israa’iil, Guatemala, Honduras, the Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Palau iyo Togo.
Codayntana waxaan soo xaadirin 21 dal